« Mandeha ny mandeha » | NewsMada
Itangoronana ireo toeram-pivarotana gazety, raha vao maraina ny andro. Fanontaniana mipetraka ao an-tsain’ny tsirairay ny hoe mbola nitombo isa ihany ve ireo voan’ny pesta ? Tafakatra firy indray ny maty ? Tena mampitaintaina isan’andro isan’andro. Na izany aza, « mandeha ny mandeha », araka ny fitenin-jatovo, malaza tato ho ato.
« Mandeha ny mandeha »… Mitohy ny asa fitadiavana. Tsy maintsy mivoaka ny trano, na inona na inona mitranga. Toy izany koa ny fiainam-pirenena, ny lafiny politika, indrindra indrindra. Izay mitranga amin’ny vahoaka eo fa « mandeha ny mandeha ».
Mihahantomotra ny fifidianana. Ny kajikajy rehetra, tsy maintsy atao ? Mamy ny seza, tsy afoy havotsotra na tsy tian-kipetrahana. Ka na inona na inona fahantran’ny Malagasy, fianjadian’ny areti-mandringana, tsy fandriampahalemana, « mandeha ny mandeha » e !
Eny tokoa, mahantra ny Malagasy, mila vola ny ady amin’ny pesta, saingy ny mpisolovava azy tsy maintsy tolorana fiara tsy mataho-dalana. Nambara moa fa haloan’izy ireo tsikelikely ny vidin’izany fiara raitra izany fa tsy iantohan’ny fanjakana. Tsara ihany anefa ny mampahatsiahy fa ho tapitra amin’ny volana febroary 2019 ny fe-potoam-piasan’izy ireo.
Mbola hampametra-panontaniana ny hitohizan’ny fandoavana io volabe io, aorian’izany fe-potoam-piasana izany. Sa ve, « mandeha ny mandeha » ? Ao anatin’ny fanomanana ny fifidianana izany fanambatambazana misoko mangina izany ?
Mirona amin’ity pesta ity ny sain’ny vahoaka. Any ambadika any, « mandeha ny mandeha ». Lasibatra sahady ireo heverina ho mpifaninana matanjaka amin’io fifidianana filoham-pirenena io. Raha efa fantatra fa tsy manara-dalàna, tsy mahaloa volam-panjakana ny orinasan’ny filoha teo aloha, izay hilatsaka hofidina, nahoana no izao vao nirosoana ny fanakatonana azy ? Isika rehetra, samy variana miaro tena fa « mandeha ny mandeha ».